1. ကှနျမိုတို တညျဆောကျခဲ့သော စဈကိုငျးခံတပျ - ဦးမွငျ့အောငျ (ရှေးဟောငျးသုတသေန)
... ရမည်းသင်းနယ် သာသနာရေး - ဦးမြင့်အောင် ပျူ နှင့် ပျော့ - ဦးမြင့်အောင် သမိုင်းမတင်မီ၊ သမိုင်းကြိုနှင့်သမိုင်းဟူသော ဝေါဟာရများ - ဦးမြင့်အောင် ဝေသာလီမြို့ဟောင်း တူးဖော်ရသည့်အကြောင်း - ဦးမြင့်အောင် ...
2. ပုဂံမငျးဆကျ လင်ျကာ - ပုရိသ
eBook file size: 74.6 KB ebook pages:3Publication: ၁၉၇၅ ခုနှဈ၊ ဇှနျလ၊ အမှတျ ၈၉ ထုတျ မိုးဝစောပမေဂ်ဂဇငျးတှငျ ပါသော ဆောငျးပါး ဖွဈပါသညျ။ Download -Related Articles- ရှေးဟောင်း ပျူ-မြန်မာ ...
4. ရုံဒူးချေါ တောငျသားလူမြိုး - ထီလာစိုးမွငျ့ထယျ
... တငျပွထား၏။ Download -Related Articles- ပျူနှင့်ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ ...
5. မြန်မာ့ဒင်္ဂါး (ကုန်းဘောင်ခေတ်) - မြင့်ထွန်း
eBook file size: 62.9 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ မေလ၊ အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ်(၇)ထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- ကနဦးတွေ့ ပျူဒင်္ဂါးနှစ်ပြား ...
6. ရှေးဟောင်း ပျူ-မြန်မာ အက္ခရာစာပေသမိုင်း နှင့် ပျူအဘိဓာန် - ခင်မောင်သန်း
eBook file size: 88.7 MB ebook pages: 137 Publication: ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သုတေသနနှင့်ကျမ်းပြုဌာန သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှ စီစဉ်ထုတ်ဝေသည်။ Download -Related Articles- ပျူနှင့်ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ ...
7. ဟန်လင်းမြို့ဟောင်း - ငွေစန်းယုန်
eBook file size: 227 KB ebook pages:7Publication: ၁၉၈၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လထုတ် စာပေလုပ်သားမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ Download -Related Articles- ပျူနှင့်ဆက်စပ် စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
8. ပျူမြို့တော် - ဗိုလ်မှူးဉာဏ
eBook file size: 640 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၅၉-ခုနှစ်၊ အတွဲ(၇)၊ အမှတ်(၅) မတ်လထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ Download -Related Articles- ပျူနှင့်ဆက်စပ် စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
9. ပျူ နှင့် ပျော့ - ဦးမြင့်အောင်
eBook file size: 200 KB ebook pages: 8 Publication: ၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ ဧပြီလထုတ် စာပေလုပ်သားမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ Download -Related Articles- ဦးမြင့်အောင်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ
10. ပျူအရင် နှစ်ပေါင်း ၂၃၀၀ က ၁၂၀၀ ထိ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
eBook file size: 804 KB ebook pages:9Publication: 2004 June လထုတ် မြန်မာ့သမိုင်းပုံစာအုပ်မှ ကောက်နုတ်ချက်။ Download -Related Articles- ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ Dr.Than Tun
11. သရေခေတ္တရာခေတ် ပျူဗုဒ္ဓ၀င်များ - မြင့်ဆွေ
eBook file size: 200 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၇၈-ခုနှစ်၊ ဧပြီလထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဦးမြင့်ဆွေ၏ဆောင်းပါးများ
12. ကနဦးတွေ့ ပျူဒင်္ဂါးနှစ်ပြား - အောင်မြင့်
eBook file size: 538 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၈၂-ခုနှစ်၊ ဧပြီလထုတ်၊ ရတနာမွန်မဂ္ဂဇင်း၊ အတွဲ(၉) အမှတ်(၄)၌ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ပျူနှင့်ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ ...
13. ပျူတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ မည်သို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့သနည်း - ရည်စိန်
14. ခရစ်နှစ် ၈/၉ ရာစု ပျူမြို့တော် ဟန်လင်းလော၊ သရေခေတ္တရာလော - ရည်စိန်
eBook file size: 109 KB ebook pages:9Publication: ၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လထုတ် ဉာဏ်လင်းဓမ္မစာပဒေသာမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဦးရည်စိန်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ
15. ပျူတပ်မြို့အချို့၏တည်နေရာ - ရည်စိန်
16. ခရစ်နှစ် ၉ ရာစု ပျူနိုင်ငံ၏ပထ၀ီဝင် အနေအထား - ရည်စိန်
17. ရှေးတရုတ်တို့ သိခဲ့သော ပျူနိုင်ငံအမည် ပျူဝတ် နှင့် ဗြဟ္မာဝတ် - ရည်စိန်
18. ဘီစီ ၂ ရာစု နှင့် အေဒီ ၄ ရာစုနှစ်အတွင်း ရှေးတရုတ်တို့ သိခဲ့သော ပျူနိုင်ငံ အမည်များ - ရည်စိန်
19. ပျူနှင့်ပျူကျောက်စာများ သို့မဟုတ် ပျူခေတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ - ဦးအောင်သိန်း(မန်းတက္ကသိုလ်-အကျိုးဆောင်ကထိက)
eBook file size: 14.1 MB ebook pages: 112 ပုံနှိပ်ခြင်း - ပထမအကြိမ်၊ ဒီဇင်ဘာ(၁)ရက်၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ မောင်ထွန်းဘေပုံနှိပ်တိုက်၊ မန္တလေးမြို့။ download